Imihlahlandlela Yezokuvakasha - I-Mag Incredible
Umshuwalense Wezokuvakasha: Uyini nokuthi Uyidinga Kanjani
uzilungiselele iholidi lakho elihleliwe. Unezinyanga ukuhlele. Cishe uzofika esikhumulweni sezindiza kusenesikhathi, wenze isiqiniseko sokuthi uhlola umthwalo wakho kusenesikhathi, futhi uzilungiselele uhambo olude oluya phesheya ngokuletha intandokazi yakho yezincwadi,…
Ukuqashwa KweCampervan Kungukuqala Kohambo Lokuzijabulisa
Uma uhamba nge-campervan, uzothola kuningi ongakuthanda nge-Australia. Akukhona nje kuphela ukuthi ungabona iziza eziningi, isimo sezulu singaba sihle ezindaweni ezithile. Lapha, imvelo ibukelwa phansi kodwa iyamangalisa ukuyibona. Ku...
Ufuna Isipiliyoni Sokudlela Esiyingqayizivele? Zama Ukudla kwaseJapan!
Masibhekane nakho, sonke siyakuthanda ukudla, yingakho kubonakala kunezindawo zokudlela eziningi ezintsha eziqhamukayo nganoma yisiphi isikhathi. Ukudla kwezinhlanga njengokudla kwamaShayina namaJapane, ngokwemvelo, kudume kakhulu eThailand, nasedolobheni...
Izinzuzo Zokuhlala efulethini elihlinzekwayo ngeholide
Kubantu abaningi abafuna indawo emaphakathi nebanga lamaholide abo alandelayo, ngokuvamile okuwukuphela kwenketho efika engqondweni yakho ihhotela. Nokho, kukhona enye indlela ethengekayo futhi enikeza izinsiza ezengeziwe: amafulethi anesevisi. Amafulethi anamasevisi afana namafulethi okuthi...
Izizathu ezi-5 Zokuvakashela eLangkawi Njengamanje
Uma ufuna indawo enhle yokuphumula eshisayo, iLangkawi ingaba indawo ekahle. Itholakala ngasogwini olusenyakatho-ntshonalanga yeMalaysia, iLangkawi iheha izigidi zezivakashi unyaka ngamunye. I-Langkawi inikeza amabhishi anesihlabathi, amanzi ahlanzekile, nezindawo zokungcebeleka zezinkanyezi ezinhlanu zesimanje. Empeleni iyiqoqo leziqhingi...
Thatha iholide lesikhathi sokuphila kulesi sikhathi
Njengoba uhlela isikhathi sakho samaholide kulo nyaka, thatha isikhashana ucabangele izinzuzo zeholide oya kulo kanye nobuhle bemvelo. I-Peak District, ngokwesibonelo, iyindawo enhle egcwele izindawo ezingenakuqhathaniswa, amapaki, nezinga eliphelele lokuthula kanye…
Whale Buka Indlela Efanele Kulesi Sikhathi Samaholide
Njengoba uhlela ukuzijabulisa kwakho kweholide kule sizini, thatha isikhashana ucabangele ukumangalisa nobumnandi bokubukela imikhomo. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukuhamba nomndeni, uwedwa, noma ngebhizinisi kulo nyaka, lena indlela ephelele yokuhlangana nenye yezinto ezinhle zomhlaba...